Warshadda Alaabada - Soosaarayaasha iyo Alaabada Alaabada Shiinaha
Konjac waa nooc ka mid ah cuntada laga soo saaro koonfurta Shiinaha. Konjac waa cunno cuntooyin alkaline ah, oo yareyn karta xanuunka kuwa cuna cunno badan oo aashito leh. Markaad wada cunaysid konjac, waxay ku guuleysan kartaa isku dheelitirnaanta aashitada iyo alkaliinta jirka ku jirta, taasoo waxtar u leh caafimaadka aadanaha. Shiinaha wuxuu bilaabay inuu beero konjac in ka badan 2,000 oo sano ka hor, markii dambena wuxuu ku faafay dalka Japan, halkaas oo uu ka mid noqday cunnooyinka ugu caansan ee dadka. Waxaa jira noocyo badan oo konjac ah, meelo badan oo dalkeenna ka mid ah ayaa ...
Xilliga dhir udgoon badanaa waxaa loola jeedaa geedo iyo xawaash. Dhirta waa caleemaha dhir kala duwan. Waxay noqon karaan kuwo cusub, hawo-qalalan ama dhulka. Xawaashku waa iniinyaha, burooyinkeeda, miraha, ubaxyada, jilif iyo xididdada dhirta. Dhir udgoonku waxay leeyihiin dhadhan aad uga xoog badan kan vanilj. Xaaladaha qaarkood, warshad ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro dhir iyo dhir udgoon labadaba. Cunnooyinka qaar waxaa laga sameeyaa isku dar ah dhir udgoon badan (sida paprika) ama isku darka geedo (sida bacaha xawaashka). Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay cuntada, karinta iyo ka shaqeynta cuntada, waxaad ...
Khudradda la qaboojiyey waa nooc ka mid ah cuntada la qaboojiyey, taas oo ah xirmo yar oo cunto ah oo lagu sameeyo qaboojinta khudradda cusub sida basbaaska, yaanyada, digirta iyo qajaarka heerkulka ugu hooseeya iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib marka la farsameeyo.
Sanjabiilku waa xidido leh udgoon udgoon udgoon iyo dhadhan dabeecad leh! sinjibiil cusub waa dhadhan muhiim u ah cunnooyinka badan ee Aasiya. Dadka badankood sinjibiil waxaa lagu cunaa qadar yar sidaa darteed waxaa loo qaadan karaa inay muhiimad gaar ah u leeyihiin dhadhankiisa marka loo eego qiimaha nafaqada. Isticmaal sinjibiil dhadhanka shiilan, saladhyada, maraqyada iyo marinada. Kudar cuntada dhamaadka wax karinta madaama sinjibiilku lumiyo dhadhankiisii ​​marba markuu karsado.
Budada sinjibiil waxay ka samaysan tahay jajab sinjibiil. Sababtoo ah jajabyada sinjibiil waxay waxtar weyn u yeesheen caafimaadka jirka iyo maskaxda ee jirka, sidaas darteed cabitaanka budada sinjibiil, dabcan, waxay sidoo kale caafimaadka wax weyn ka tari kartaa. Sidaa darteed, budada sinjibiil waxay leedahay hurdo xumo, kor u qaadista rabitaanka cuntada, iska caabinta qiiqa, xakameynta burooyinka, gabowga, qabow, ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa, hagaajinta tayada hurdada iyo dhinacyada kala duwan ee doorka iyo saameynta. Sidaa darteed shaqada caloosha ma fiicna, rabitaanka cuntada oo liita, astaamaha waa daran yihiin, hurdo xumo, budada sinjibiil waa nooc ka mid ah cuntada & daawada aad u wanaagsan.
Waxaa jira afar ilaa shan jeer oo dheeri ah oo barbardhigaya sinjibiisha dabiiciga ah iyo sinjibiillada caadiga ah, inta ay u egtahay mid jilicsan, waxay dhadhamisaa aad u basbaas. Waxaa intaa dheer, sinjibiil dabiici ah ayaa ku yar fiber, sidaa darteed waxay ka dhadhan fiican yihiin kana jilicsan yihiin sinjibiilka caadiga ah.
Xullo alaabta ceyriinka ah ee cusub, oo leh midab habboon iyo maqaar aan toosnayn oo aan qudhmin.
Nadiifinta iyo nadiifinta alaabta ceyriinka ah ee biyo kulul oo nadiif ah. Ku qoynaya qaboojinta alaabta ceeriin ee xallinta maltose boqolkiiba saami ahaan. Soo qaad alaabta ceyriin ee sonkorta lagu qooyey, si buuxda u daadi, oo dhaqso u qabooji -18℃. Xitaa si siman ugu dheji maaddooyinka si dhaqso leh loo qaboojiyey baakadaha maadada, oo ay ku jiraan 120kg dheriga kasta. Heerkulka saliidda ee tifaftirka Lentinus waa 85 ~ 90℃ shahaadada faaruqina waa ka hooseysaa -0.095MPa. Markaad shiileyso, ka fiirso daloolka fiirinta oo gudaha ku saliidee. Shayga waxaa lagu sifeeyaa mashiinka weelka lagu nadiifiyo ee xirmada 1500g ee alaabada ah sanduuqyada aluminium aluminium. Ku rid bac ah sunta sunta dila, oo shaabadee. Taariikhda uu dhacayo waxay kuxirantahay shuruudaha qandaraaska. Alaabooyinka la dhammeeyay waa in lagu kaydiyaa bakhaarka, masaafada u dhaxaysa darbiyada waa inay ka badan tahay 20cm. Qoyaanka qoyaanka ah ee ku jira bakhaarka waa inuusan ka badnaan 50%.